Voasambotra omaly teny Ambolonkandrina… : nidoboka eny Tsiafahy i Leko, ilay nandoatra ny mason-janany | NewsMada
Voasambotra omaly teny Ambolonkandrina… : nidoboka eny Tsiafahy i Leko, ilay nandoatra ny mason-janany
Omaly ihany, taorian’ny nahasamboran’ny polisy azy, vao maraina teny Ambolonkandrina, natolotra ny fampanoavana i Leko, ilay nandoatra ny mason-janany, vao efa-taona monja. Taorian’izay, avy hatrany dia naiditra am-ponja eny Tsiafahy ity raim-pianakaviana nahavanon-doza ity.
Niaiky i Leko nandritra ny famotorana nataon’ny polisy fa nangarona ny mason-janany vavy antsoina hoe Faliherinirina Erica. Rehefa hitany fa tafavoaka ny voamasony havanana nokendainy fa tsy nety maty ilay zanany. Ny hamono hahafaty ity menaky ny ainy mihitsy anefa no tena tanjony, araka ny fanazavany tamin’ny polisy hatrany. Nilaza izy fa tsy sitrapony ny nanao ity fihetsika feno habibiana ity, fa misy hery hafa niditra tao aminy ary naniraka azy hamono ilay zanany.
Tsiahivina fa tonga nametraka fitoriana ao amin’ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona sy ny heloka mamoafady etsy Anosy, ny renin’ilay zazavavikely niharam-boina fa noloaram-badiny ny mason-janany, ny zoma 18 marsa 2016 teo. Raha ny filazan’ny reniny, niara-natory izy mivady sy ny zanany mianadahy, ny alin’ny alakamisy ka ilay vavikely no teo akaikin’ny rainy. Novonoiny anefa ny jiro na tsy fanaon’izy ireo aza ny maty jiro amin’ny alina. Ny zoma tamin’ny 3 ora maraina, taitra ilay ramatoa naheno an-janany vavy nitomany sy nikiakiaka. Nifoha ilay ramatoa nandrehitra jiro ka ny vadiny efa eo ambon’ilay zanany mandoatra ny masony no hitany. Efa nipotsaka mihitsy ny voamasony havanana ary nihosin-dra ny akanjony sy ny fandriana. Nitsoaka avy hatrany ilay ramatoa sy ny zanany roa ary niantso vonjy tamin’ireo olona teo amin’ny manodidina. Nentina teny amin’ny hopitaly avy hatrany ilay niharam-boina taorian’izay.
Noraisin’ny fanjakana an-tanana ny fitsaboana an’i Erica
Mbola manaraka fitsaboana ao amin’ny hopitaly HJRA i Erica amin’izao fotoana izao.
Notoranina izy ary nozahana, omaly, ny masony. Aorian’ny fanadihadiana vao fantatra ny fahavoazana nahazo ny masony na azo sitranina ihany na tsia ka hitarika amin’ny fahajambana. Tsy nahatsiaro tena sady nandoa ity zaza ity rehefa tonga teny amin’ny hopitaly ka novonjena aloha ny ainy. « Ny alahady izy no nampidirina ao amin’ny sampana mitsabo ny maso », hoy ny profesora Raobela Léa.
Hiantohan’ny fanjakana tanteraka ny lany rehetra amin’ny fitsaboana sy ny fitiliana atao amin’i Faliherinirina Erica mandritra ny fijanonana ao amin’ny HJRA. Efa notoloran’ny solontenan’ny fiadidiana ny Repoblika vola koa ny reniny ny alatsinainy teo, hividianany sakafo.
Araka ny voalazan’ny and. 19 amin’ny Fanambarana Iraisam-pirenena momba ny Zon’ny zaza (Fizoza), tamin’ny 20 novambra 1989, manan-jo arovana ny zaza. Ankoatra ny herisetra ara-tsaina, fanilihana sy tsy firaharahiana (abandon, negligence), fampiasana amin’ny fivarotantena…, anisan’ny herisetra voafaritry ny Fizoza ny herisetra sy fampijaliana ara-batana. Anisan’ireo firenena nankato ary nanao sonia io fanambarana io i Madagasikara ny taona 1991.
Jean Claude sy Vonjy